"14 Dia nankany amin’i Jesosy ny mpianatr’i Jaona ka nanao hoe: Nahoana izahay sy ny Fariseo no mifady hanina matetika, fa ny mpianatrao kosa tsy mba mifady? 15 Ary hoy Jesosy taminy: Moa mahay misaona va ny havan’ny mpampakatra, raha mbola ao aminy ihany ny mpampakatra? fa ho avy ny andro izay hanesorana ny mpampakatra hiala aminy, dia amin’izay vao hifady izy. 16 Ary tsy misy olona manampina lamba tonta amin’ny tapa-damba tsy mbola voalòna; fa ny vaovao izay natampina dia handrovitra ny lamba, ka hitatra ny triatra. 17 Ary tsy misy manisy divay vaovao ao anaty siny hoditra tonta; raha izany, dia ho triatra ny siny hoditra, ka ho raraka ny divay, sady ho simba ny siny hoditra; fa ny siny hoditra vaovao no asian’ny olona divay vaovao, dia miara-maharitra izy roroa. 18 Raha mbola nilaza izany taminy Izy, indro, tonga ny mpanapaka anankiray, dia niankohoka teo anatrehany ka nanao hoe: Maty ankehitriny izao ny zanako-vavy; fa andeha re, mametraha ny tananao aminy, dia ho velona izy. 19 Dia nitsangana nanaraka azy Jesosy mbamin’ny mpianany. 20 Ary, indro, nisy vehivavy anankiray, izay efa narary roa ambin’ny folo taona, nankeo ivohony ka nanendry ny somotraviavin-dambany. 21 Fa hoy izy anakampony: Na dia ny lambany ihany aza no ho voatendriko, dia ho sitrana aho. 22 Ary Jesosy nihodina ka nahita azy, dia nanao hoe: Matokia, ry zanako-vavy, ny finoanao no efa nahasitrana anao. Dia sitrana ilay vehivavy tamin’ izay ora izay. 23 Ary Jesosy, nony niditra tao an-tranon’ilay mpanapaka ka nahita ny mpitsoka sodina sy ny vahoaka nitabataba, 24 dia nanao hoe: Mivoaha; fa tsy maty razazavavy, fa matory. Dia nihomehy Azy fatratra ny olona. 25 Ary nony efa navoaka ny olona, dia niditra Jesosy ka nandray ny tànan-drazazavavy, dia nitsangana izy. 26 Ary ny lazan’izany dia niely tamin’izany tany rehetra izany. " Matio 9:14-26
Fanontaniana mila valiny (14-16). Na ny mpianatr’i Jaona mpanao batisa aza eto dia mbola tsy tena mahalala tsara ny mpianatr’i Jesosy na ny maha izy azy an’I Jesosy ka gaga ny amin’ny tsy anaovan’ireto farany fifadiankanina tahaka ireo fariseo. Mampiasa fanoharana i Jesosy Kristy, fanoharana ny amin’ny fety fampakaram-bady. Raha mbola eo ny mpampiakatra, fifaliana no atrehin’ireo namany, koa inona no antony hifadiana hanina izay fanao amin’ny vanim-potoana manjombona?
Ny tonta sy ny vao (17). Mitohy ny fanazavana: ny divay sy ny siny indray izay ilaina amin’ny fiainana andavan’andro no ampiasain’i Jesosy mba hanehoany fa tsy manana toerana ao anatin’ny fanekena vaovao ny fombafomba amam-panaon’ny mpianatr’i Jaona sy ny fariseo.
Finoana (18-26): Fanehoana finoana karazany roa no hita eto (18-23): ny finoan’ilay mpanapaka, manambara mivantana amin’i Jesosy Izy fa raha mametra-tànana amin’ny zanany vavy ny Tompo dia ho velona ity zanany (18-19). Ny an’ilay vehivavy izay narary nandritry ny roa ambin’ny folo taona kosa. Finoana anakampo fa raha voatendriny na ny lamban’i Jesosy ihany aza dia ho sitrana izy. Samy hitan’i Jesosy ireo olona roa ireo ary samy niantrany. Nisy akony tamin’izy ireo izany finoana izany, ary nisy akony tamin’ny tontolo manodidina koa satria dia niely ny fahagagana nataon’i Jesosy (26).
Fetran’ny siansa: manampetra tokoa ny fahaizana ara-medikaly satria dia 12 taona be izao no tsy nahitam-panafana ity aretina ity (nandeha rà). Andao hanatona ny Tompo Ilay tompon’ny fanasitranana.
Andininy vitsivitsy momba ny finoana Matio 21:21-22, Rômanina 4:18-22, Hebreo 11:17-19.